Sida Loogu Qalabeeyo Browser-ka TOR Qalabka Android | Androidsis
Sida loo dajiyo TOR Browser aaladda Android
Shabakada TOR muddo dheer ayaa loo isticmaali jiray daalacashada aan la aqoon kumbuyuutarrada, laakiin waqtiga oo laga gudbo mar horeba waa suurtagal in laga helo aalad kasta oo aan ahayn Windows. Isticmaalayaasha Android-ka ee leh soo-saarista rasmiga rasmiga ah waxay hadda ka faa'iideysan karaan dhammaan astaamaheeda.
Ilaa goor dhow waxay ahayd lagama maarmaan in la helo ilaa laba codsi oo lagu socodsiiyo shabakadda, barnaamijyada gaarka ahi waxay ahaayeen Orweb (biraawsarka) iyo Orbot (isku xidhka). Midka labaad waa in si buuxda loo qaabeeyaa si uu hadhow awood ugu yeesho inuu si gaar ah ula baaraan biraawsarka 'Orweb'.
Si aad uga adeegsato shabakadda TOR aaladda Android, kala soo bax Tor Browser, codsi horey u soo maray dhowr betas ka hor inta uusan sameynin boodboodka ugu dambeeya. Isku xirnaanshaha dalabka ayaa horeyba loo qaabeeyey, in kastoo aan qaabeyn karno qaar ka mid ah xulashooyinkiisa gudaha haddii aan rabno.
1 Sida loo rakibo TOR Browser aaladda Android
2 Xullo hab mugdi ah
3 Ku rakib fiilooyin aasaasi ah
Sida loo rakibo TOR Browser aaladda Android
Waxa ugu weyn ayaa ah inaad ka soo degsato barnaamijka TOR Browser barnaamijka 'Store Store'Waa biraawsar bilaash ah, deg deg ah waxaanna daalacan karnaa si qarsoodi ah wakhti kasta, annaga oo ilaalinayna asturnaantayada shabakadda. TOR Browser wuxuu leeyahay codsi badan oo badan, taraafikada ayaa la isugu gudbiyaa laguna qariyey saddex lakab.
Bog Fure: Rasmi, Gaar ahaaneed, & Amni
Developer: Mashruuca Tor
Markaad soo dejiso oo aad rakibto dooro waxay ku tusi doontaa saddex ikhtiyaar oo aad ka kala doorato, midka ku habboon dareenkan waa midka dhexda ku jira, ee "Safer"maadaama ay curyaamiso astaamaha websaydhka oo inta badan khatar ah. Marka tan la doorto, waxaan sameyneynaa xoogaa hagaajin ah biraawsar.
Sida caadiga ah waxay badanaa ka saartaa shaashadda nabadgelyada, guji saddexda dhibic ee midigta hoose iyo marin u helka Settings. Mar alla markii gudaha dejintu hoos u rogto oo aad "Advanced" dhaqaajiso "U oggolow shaashadaha"Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay in aad ka dhigto biraawsarkaaga asalka ah, waad kicin kartaa Guud ahaan - U dejiso sida biraawsar asal ah.
Xullo hab mugdi ah
TOR Browser sidoo kale wuxuu leeyahay qaab mugdi ah oo caan ah, waa la hawlgelin karaa Haddii isticmaaleyaashu ay rabaan iyo sida barnaamijyada kaleba, waxay naga caawin doontaa inaanaan daalin indhaha wax badan oo aan badbaadinno boqolley yar oo batteri ah. Habkaani wuxuu kaloo ku darayaa midabada cawl, markaa gabi ahaanba mugdi ma ahan.
Si aad ugudhaqaajiso qaabka mugdiga ah TOR Browser waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku fur barnaamijka TOR Browser taleefankaaga
Dhinaca midig ee hoose ka gal sedexda dhibic oo guji Deji
Hadda Guud guji Customize oo ugu dambeyn Mawduuca xulo "Dark" si aad u dhaqaajiso qaabka
Markaad tan sameyso waxaad dhaqaajineysaa habka mugdiga ah
Ku rakib fiilooyin aasaasi ah
TOR Browser, sida daalacayaasha kale, waxay noo oggolaan doontaa inaan rakibno qaar ka mid ah wax-ku-darka si aan uga dhigno mid shaqeynaya, waxay ku dhacdaa Google Chrome, Firefox sidoo kale way u oggolaaneysaa, in kasta oo laga reebo. Kudarrooyinka si looga faa'iideysto TOR Browser waa kuwan soo socda:
Qeexitaanka Sare ee YouTube: Qalabkaani wuxuu ku ciyaari doonaa qeexitaan sare waqti kasta, illaa iyo inta fiidiyowgu u oggolaanayo oo sida caadiga ah wuxuu kugula talinayaa fiidiyowyada in lagu ciyaaro HD wixii ka dambeeya. Waa mid ka mid ah qalabka aasaasiga ah haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato madal caan ah. Waxay u shaqeysaa si deg deg ah waana wax aad uga dhaqso badan ciyaaryahanka Google.
Akhriste madow: Mawduucan mugdiga ahi wuxuu la jaan qaadayaa dhammaan boggaga, waxkastoo websaydhka ah, daryeelo indhahaaga oo waad ku daalacan kartaa wakhti kasta qaabkan. Waa ikhtiyaar marka laga reebo kan hadda ay bixiso TOR Browser, oo si aad ah loogu taliyay haddii aad rabto inaad isticmaasho inta lagu jiro maalinta iyo gaar ahaan habeenkii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo dajiyo TOR Browser aaladda Android
Smartwatch-ka Facebook ayaa run noqon doona 2022
BlackBerry, oo ay kujirto kumbuyuutarka jirka, wuxuu laaban doonaa sanadka 2021